Shiinaha Counter-socodka xiran Wareegyada Qaboojinta Circuit xiran / Evaporative xiran-Wareegyada qaboojiye-saaraha iyo alaab-qeybiye | Yubing
Tilmaanta waxqabadka alaabta
Marka la barbardhigo munaaradaha qaboojinta nidaamka furan, si sahlan loo dayactiro waa astaamo gaar ah oo ka mid ah qalabka wax lagu xiro ee ICE ee uumi-baxayaasha ah kuwaas oo ah ikhtiyaar aad u fiican nidaamka wax qaboojinta oo leh faa'iidooyin kale oo soo socda:
► Yaree isticmaalka biyaha, keydso tamarta iyo dayactirka qalabka.
► Ka fogow halista weyn ee wasakhda waxyaabaha keena kuleyliyaasha ama xarumaha la midka ah.
► Rakibaadda qiimaha leh iyo kharashka hawlgalku waa muhiim (uma baahna bambooyin, fureyaal, shaqooyin dheeri ah oo dheeri ah iyo wixii la mid ah)
►Jawiga arjiga baahsan - qalab xiran ayaa loo heli karaa inuu ku shaqeeyo heerkulka banaanka ee qaboojinta. Waa wax aad u kala duwan oo laga bilaabo qaboojinta qalabka habka warshadaha ilaa joogteynta heerkulka xarumaha xogta iyo qolalka kombiyuutarka ilaa wax soo saarka kiimikada.
ICE Evaporative counter-qulqulka xiran qaboojiyaha wareegga 'qaab dhismeedka iyo qaybaha muhiimka ah hordhaca:
Nidaamka hawo bixinta (Fan)
Farshaxanka banaanka ah ee waxqabadka wanaagsan ee naqshadeynta seddex-ilaalinta ah, oo ku qalabeysan aaladda aluminium iyo IP56, F fasalka wadista mootada oo leh hawo-mareenka oo xakameynaya hawada oo yareynaya qulqulka.
Nidaamka Nidaamka Qaybinta Biyaha ee Sare
ICE uumi-baxayaasha loo yaqaan 'ICE evaporative xiran munaaradaha qaboojinta ayaa lagu rakibay nambarka buufinta nooca loo yaqaan' nozzles spray 'wali waa xirmaysaa iyadoo la siinayo xitaa iyo biyo qaybinta joogto ah si loo kordhiyo kuleylka u dhexeeya hawada, biyaha iyo dheecaanka geedi socodka si loo kordhiyo waxtarka diidmada kuleylka.
Waxyaalaha lagu buufiyo buufinta lagu rakibay tubooyinka biyaha qaybiya ee aan daxalka lahayn ee kala-goynta fudud.
Tube Copper Red
Tubbada qaybta muhiimka ah waxay ku codsaneysaa tayo sare T2 nooca maar casaanka ah ee laga soo iibiyey soo saaraha caanka ah ee caanka ah si loo hubiyo waxqabad la isku halleyn karo oo deggan oo qalabkeenna ah.
Waxaa la dhisay oo laga sameeyay PVC si loo yareeyo luminta biyaha inta lagu jiro hawlgalka qoyan iyo xaddididda heerka socodka si loo yareeyo isticmaalka biyaha loona fogaado cabirka.
Louver oo leh Damper
Waxaa jira jalaq u adeegta si loo xakameeyo socodka hawada inta lagu jiro hawlgalka ee munaaradaha qaboojinta lagu dabaqay biyo gaar ah, nidaamka bamka kuleylka hawada ama habka qaboojinta ee la mid ah si looga fogaado kuleylka luminta inta lagu jiro waqtiga qalabka gaar ahaan xilliga qabow.
Marka heerkulka jawigu ka sarreeyo 0 ℉ (-18 ℃), oo leh kuleyliyaha korontada kuleylka biyaha ku jira weelka kama yaraan doono 40 ℉ (4.4 ℃). Waxaa jira difaac biyo oo hooseeya oo loo dejiyey kululeeyaha si loo hubiyo inay shaqeynayso oo keliya markii la dhex galiyo biyaha. Dhammaan walxaha ku saabsan kululeeyaha korontada ku shaqeeya ayaa lagu rakibay kiiska gudihiisa waxayna ku habboon yihiin hawlgalka banaanka.
Naqshadeynta-Naqshadeynta Biyaha Biyaha
Naqshadeynta jiirada (u janjeedho dhanka bixitaanka wasakhda wasakhaysan) si looga fogaado fadhiid biyo iyo birta birta ah ee birta ah ayaa hagaajin doonta qulqulka iyo dheecaanka wasakhda isku mar ayaa nadiifisa wasakhda iyo wasakhda ku jirta berkada.
Munaaradaha qaboojinta ICE waxay isticmaalaan xaashida birta ah ee dahaarka u adkaysta wasakhda aadka u saraysa taas oo ka kooban zinc maadada asaasiga u weyn, oo ay weheliso Al, Mg iyo raad raad silikoon ah. Nolosha adeegga waa 3 ~ 6 jeer ka dheer isbarbar dhigga xaashida birta ah ee aluminized aluminium caadi ah iyo habka kuleylka-iska caabbinta iyo ka-hortagga kuleylka sidoo kale waa mid aad u fiican.
Hore: Wareegyada Wareegsan ee Wareegsan ee Wareegtada Wareegga / Qaboojiyaha Xirmooyinka Wareegga Wareegga
Xiga: Nidaamka Daawada Kiimikada ee ICE ee Daaweynta Biyaha ee Nidaamka Qaboojinta
Halbeegyada Farsamada ee Taabashada-socodka Xiritaanka Wareegga Wareejinta
Mashiinka lagu buufiyo
Cabbirka tuubada / tubada
Range Cadaadiska Shaqada
Qaboojiyaha wareegga xiran
Tower-ka Qaboojinta xiran
Mashiinka Qaboojinta ee xiran
Counter-socodka xiran munaaradda qaboojinta wareegga
Qaboojiye xiran oo uumi baxa
Munaaraddii Cillada u xidhnayd ee Evaporative
Munaaradda qaboojiyaha wareegga wareegga biyo qabow